साम्राज्ञीले आफू कहिले सिक्ने ? - Sutra TV Sutra TV
साम्राज्ञीले आफू कहिले सिक्ने ?
अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सिकाउने कुरा गरिन् । मारुनी फिल्मको गीत रिलिज कार्यक्रममा शाहले यो कुरा गर्वले भनिन् । साम्राज्ञीले आफूले काम गरेका फिल्ममा जति पनि नयाँ हिरो भएका छन्, उनीहरुलाई सिकाएको भनेर गर्व गरेकी छिन् । साम्राज्ञीले त आफूलाई सिकाउन पनि रमाइलो लाग्ने बताइन् ।
साम्राज्ञीले सिकाएको हिरोमा सलिनमान बनियाँ, धिरज मगर पर्छन् । साम्राज्ञीले यसो भन्दा उनको अभिनय पनि हेर्नु पर्छ । साम्राज्ञीले काम गरेका आजसम्मका फिल्ममा उनको अभिनय एकहोरो नै छ । उनले अहिलेसम्म फरक अभिनय गर्न नसकेको भनेर दर्शकले नै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
अरुलाई सिकाउने साम्राज्ञीले आफूले पनि सिक्न आवश्यक छ । अरुलाई सिकाउँदा रमाइलो लाग्छ भन्दै गर्दा आफूले पनि अरुले सिकाएको ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । साम्राज्ञीले आफूले पनि धेरै सिक्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझेकी होलिन् नी ?